नेपालमा चीनबारे थुप्रै भ्रम छन्
चीनमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका चेतनाथ आचार्यले त्यहाँ देखे-भोगेका अनुभवलाई समेटेर तयार पारेको पुस्तक 'चीन चियाउँदा' सार्वजनिक गरेका छन्। पुस्तकको वरिपरी रहेर आचार्यसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।
तपाईंको पुस्तक ‘चीन चियाउँदा’, नामैले चीनबारे लेखिएको भन्ने बुझिन्छ। पुस्तकमा ‘चियाउँदा जसरी मात्र’ देखिएका कुरा छन् कि अध्ययन/अनुसन्धान पनि छन्?
चीन आफैँमा विशाल मुलुक हो। विशाल चीनसँग वृहत संस्कृति र पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास रहेको छ। त्यस्तो मुलुकमा केही वर्ष बसेर चीनलाई पूरै चिनाउने कृति लेख्नु पक्कै पनि संभव कार्य होइन। त्यसकारण मैले यो कृतिको नाम चीन चियाउँदा राखेको हुँ। अध्ययन र अनुसन्धान फरक कुरा हुन्। यो पुस्तक तयार बनाउन मैले ठूलो अनुसन्धान त गरेको छैन तर अध्ययन चाहिँ निकै गरेको छु।
पुस्तक चीनबारे बुझ्न कत्तिको उपयोगी होला?
यो पुस्तकले चिनियाँ समाज र संस्कृतिलाई बुझ्नका लागि केही सघाउ पुर्याउँछ र पूरै समेट्छ भनेर म दाबीचाहिँ गर्दिन। विगत चारवर्षदेखि मैले चीन बस्दा देखेका र भोगेका कुरालाई पुस्तकमा राखेको छु अनि यस बीचमा चीन भ्रमण गर्ने अन्य केही नेपालीको भावनालाई यो पुस्तकमा समेटिएकाले चीनबारे बुझ्न उपयोगी हुने मैले अपेक्षा गरेको छु।
तपाईं चार वर्षपहिले चीन जानुअघि त्यो देशबारे धारणा कस्तो थियो, गएपछिको अनुभव कस्तो रह्यो?
हामी अधिकांश नेपालीहरु अहिले पनि चीनका बारेमा थुप्रै भ्रम पालेर बसेका छौँ। पश्चिमा संचार जगतले चीनका बारेमा बंग्याइएका गलत सूचनाबाट हामीले छिमेकी मुलुक भएर पनि चीनका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिन पाएका छैनौँ। नेपालमा हुँदा सुनिएको र बुझिएको चीन त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष हेर्दा धेरै फरक छ। मैले पनि नेपालमा हुँदा बुझेको चीन र त्यहीँ गएर देखेको चीनमा व्यापक फरक पाएँ। हुन त चार वर्ष अगाडि म चीनमा काम गर्न जानु अगाडि पनि मैले थुप्रैपटक चीनको भ्रमण गरेको थिएँ। छोटो समयको भ्रमणमा देखिएको चीन भन्दा त्यहीँ काम गर्दै हेरिएको चीन पनि फरक छ।
चिनियाँहरु नेपाललाई कसरी बुझ्छन्? तपाईं नेपाली भन्ने थाहा पाउँदा उनीहरुले चासो व्यक्त गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ?
चीनको भूगोल १४ वटा मुुलुकसँग जोडिन्छ। त्यसमध्ये नेपाल एउटा हो। मैले चिनियाँलाई म नेपालबाट आएको हुँ भन्दा उनीहरुले भन्ने गर्छन् ओ हो नेपाल त पाकिस्तानपछिको हाम्रो घनिष्ट मुलुक हो। चिनियाँहरुले नेपाललाई सानो सुन्दर र शान्त देश भनेर चिन्छन्। नेपालीहरुको मुस्कान चिनियाँहरुलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुरा हो। चिनियाँहरु भन्छन् नेपालीहरुमा निश्चल मुस्कान र हाँसो छ। संसारकै सबैभन्दा तनावरहित मानिस नेपालीहरु हुन्। योसँगै थुप्रै चिनियाँहरुमा अहिले पनि भगवान बुद्धको जन्मस्थल बारेमा भ्रम छ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा जब उनीहरु थाहा पाउँछन् उनीहरु अत्यन्त खुसी हुन्छन् र नेपाल भ्रमण गर्न लालायित हुन्छन्।
नेपालीले चाहिँ चीनलाई कसरी बुझेको पाउनुहुन्छ? ‘चीन बस्छु’ भन्दा नेपालीहरु कसरी चासो देखाउँछन्?
म चीनमा बसेर काम गर्छु भन्दा धेरै नेपालीहरुले मलाई सोध्ने कुरा भाषा र संस्कृतिकै हुन्छन्। चिनियाँहरुले चपस्टिकले खाने गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि नेपालीहरुमा थप जिज्ञासा उत्पन्न गराउँछ। त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको चिनियाँ समाजका बारेमा पनि धेरै नेपालीको जिज्ञासा हुने गर्छ। विशेषतः चिनियाँहरुको खानपान संस्कृतिसँगै चिनियाँ बिबाह परम्परा र जातीय अवस्थाका बारेमा पनि थुपै नेपालीले सोध्ने गर्दछन्।
तपाईंलाई चीनको रोचक लाग्ने पक्ष के हो?
विशाल मुुलुक अधिक जनसंख्या र पुरानो संस्कृति बोकेको मुलुक भएकाले मलाई चीनमा रोचक लागेका थुप्रै कुराहरु छन्। तपाईंलाई केही बताउनु पर्दा चिनियाँ बिबाह परम्परामा चियालाई अनिवार्य मानिन्छ। चियासँग साइनो साट्ने कुरा निकै रोचक छ। त्यसैगरी चिनियाँ थर र जाति हस्तान्तरण निकै रमाइलो छ। चिनियाँ चलनमा बाबुको थर र आमाको जात सन्तानमा जाने गर्छ तर पनि बाबु अथवा आमा कुनै एक अल्पसंख्यक जातिको भएमा सामान्य अवस्थामा सन्तान अल्पसंख्यक जातिकै हुने गर्छ। यसरी हेर्दा सन्तानको जात बाबु आमाको इच्छामा जाने गरेको पाइन्छ। अप्रिल महिनामा पर्ने पूर्खा दिवसका दिन मरेर गएका आफन्तको सम्झनामा बजारबाट नक्कली पैसा किनेर जलाउने गरिन्छ। अनि कसैकसैले चाहिँ चिहानमा त्यस्ता नक्कली पैसा राखेर मरिसकेको मान्छेलाई खर्च दिइने चलन पनि छ।
चीनले धेरै क्षेत्रमा आफूलाई विकास गर्दैछ। त्यहाँको कुन पक्षले तपाईंको ध्यानचाहिँ बढी खिचेको छ?
तीब्र गतिमा बिकास गरिरहेको चीनले गरेको प्रविधिको विकास र पूँजीको संचिती अचम्म लाग्दो छ। पाँच वर्षभित्रै चार करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई गरिबीबाट मुक्त गर्नु, विश्वले असंभवन भनेको विकास कार्य गरेर देखाउनु र रातारात मरुभूमिलाई हरियाली बनाउन सक्नु चीनमा मैले देखेका सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दा कुराहरु हुन्। तिब्बतको पठार मरुभूमिमा रेल कुदाउने कुरा दुई अगाडिसम्म संसारले असंभव भन्दा आएको थियो। क्रेनले ठूला रुख रोपेर सलाइन पानी दिएर एकै रातमा नयाँ जंगल बनाउने गरेको कुरा पनि मेरो ध्यान तान्ने विषयमा एक हो।
नेपालसँग के कुरामा बढी तुलना गर्नुहुन्छ?
चीनको तुलनामा नेपालसँग अधिक प्राकृतिक स्रोत र साधन छ। चीनको भन्दा नेपालको भूबनोट सहज पनि छ। तर नेपालको विकास चीनको तुलनामा अत्यन्त सुष्त छ। यसो हुनुको मुख्य कारण नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था हो। हामी नेपालीहरुको आपसी बेमेल र विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलले गर्दा नेपालमा विकास हुँदैन। विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागिता पनि नेपालमा कम हुने गर्छ। बुद्ध धर्म र कतिपय संस्कृति दुवै देशमा समान रुपमा पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २८, २०७४, ०३:२३:०८